Xalka Iftiinka Waddada Led ee Jumlada ah, Iibiyaha Iftiinka Waddada Led | Chz
Guriga > Alaabta > Iftiinka Waddada
Astaamaha CHZ ee nalka wadada nalka dibadda:
Chip LED: Isticmaalka PHILIPS chip, oo leh hawlkarnimo sare iyo nolol adeeg dheer> 50000 saacadood.
Darawalka: Isticmaalka darawalka Meanwell ama Inventronics, IP66 waa la qiimeeyay, tayo sare leh oo leh waxqabad la hagaajiyay. Waxtarka awoodda ≥ 0.95.
Heerkulka Midabka: Nalalka wadada LED waxay bixiyaan heerkul midab ah 3000, 4000, 5000, 5700, iyo 6500 Kelvin, oo aad ugu fiican hagaajinta muuqaalka dhismaha.
Optics: Qaybaha indhaha waxay gaadhaan heerarka ilaalinta IP66. Nidaamka indhaha ee LED wuxuu kor u qaadaa iftiinka aagga bartilmaameedka si loo hagaajiyo labbiska iftiinka.
Xiritaan: Isticmaalka hiitarka lafaha kalluunka oo hufan oo leh muuqaal qurxoon. Guryaha aluminiumka ah ee la shubay ayaa si koronto ahaan loo buufiyaa, lagu buufiyaa daahan budada polyesterka ah, lagu daaweeyay ka hortagga daxalka, waxaana lagu daaweeyaa foornada 180oC.
Cable: Isticmaalka fiilada caagga silikoon si aad u geliso awood badbaado leh oo hufan. Waxay ku xidhan tahay qanjirka fiilada oo leh boolal.
Dammaanadda: 5 sano oo dammaanad ah oo loogu talagalay laambada oo dhan. Ha isku dayin inaad kala furfurto daboolka sababtoo ah tani waxay jebinaysaa shaabadda oo waxay burinaysaa dhammaan dammaanadda.
Shahaadooyinka: ENEC, TUV, iyo RoHS
Xakamaynta tayada: Tijaabooyin adag oo ay ku jiraan tijaabada heerkulka sare iyo hoose, tijaabada biyuhu, tijaabada shoogga, tijaabinta da'da, tijaabinta xajinta, tijaabinta buufinta milixda, ayaa la sameeyaa si loo hubiyo waxqabadka mudada dheer.
Laydhka Led CHZ-ST29 LED nalka dibadda ip66 ENEC ROHS waa la ansixiyay
Nalalka wadada ee leed CHZ-ST29 waxay keentay iftiinka wadada dibadda ip66 ENEC ROHS waa la oggolaaday+https://chz-lighting.com
nalalka wadooyinka ee hogaanka u sareeya vs warshada caadiga ah sahayda tooska ah ee xayeysiinta
Nalalka wadooyinka ee hogaanka u sareeya vs warshada caadiga ah sahayda tooska ah ee xayeysiinta https://www.chz-lighting.com/street-lighting
Iftiinka waddada CHZ-ST13 nalka waddo-maskaxda leh
Iftiinka wadada CHZ-ST13 nalalka wadada ee moodada leh https://www.chz-lighting.com/street-lighting
Iftiinka wadada CHZ-ST15B cob waxay keentay iftiinka wadada
Iftiinka jidka CHZ-ST13 nalka wadadda ee moodeelka ah
Nalalka wadada CHZ-ST13 nalalka wadada toosan https://www.chz-lighting.com/street-lighting
Iftiinka dariiqa CHZ-ST23 Qalabka ledh ee tayada sare leh ee loogu talagalay nalka wadada / wadada
Iftiinka dariiqa CHZ-ST23 nalalka hogaamineed ee tayada sare leh ee wadada / nalka wadada+https://chz-lighting.com
Iftiinka dariiqa CHZ-ST26 nalka wadada ee wareegta ah
Iftiinka dariiqa CHZ-ST26 nalka dariiqa toosan ee wareega+https://chz-lighting.com
Naqshad cusub oo iftiin leh 150lm / w iftiin sare oo iftiin leh oo ku habboon wadada / beerta / waddo / baakad badan / garoon CHZ-ST25B
Naqshad cusub oo waddo Leed ah 150lm/w naqshad sare leh oo horseed u ah nalka dariiqa ku habboon wadada/garabka/road/packing lot/stadium CHZ-ST25B+https://chz-lighting.com